Ukuphakamisa abaThengisi kunye nabaXhasi | China Indawo yokuPhatha izihlalo ezinamavili
Ukuphakamisa isitulo esinamaviliUyilo olukhethekileyo lwabantu abakhubazekileyo kwaye ukuphakanyiswa kwabakhubazekileyo kunokukunceda aba bantu bakhubazekileyo bonyuke izitepsi ngokulula. Izixhobo zamkela inkqubo yolawulo ekrelekrele, inkqubo enamacala amaninzi, iimodyuli, kunye nenethiwekhi enokuthi isebenze ngokuhlekisa idatha, isenze inkqubo yokusebenza kwekheshi izinze.
I-China Wheelchair Lift Supplier Residential Use ngeXabiso lezoQoqosho
Isinyusi esihamba nkqo senzelwe abantu abakhubazekileyo, ezilungele ukuba izitulo ezinamavili zinyuke zisihla kwizinyuko okanye ngaphezulu kwamanyathelo okungena emnyango. Kwangelo xesha, inokusetyenziswa njengelifti encinci yasekhaya, ethwala abakhweli abathathu ukuya kufikelela: kubude be-6m.
Ukuba indawo yakho yofakelo ayinayo indawo eyaneleyo yokufaka isinyusi esihamba nkqo ngokuthe nkqo, emva koko uhlobo lwesikisi sokuphakamisa isitulo esinamavili luya kuba lolona khetho lwakho. Ilungele ngokukodwa ukusetyenziswa kwiindawo ezineendawo zokufaka ezinomda. Xa kuthelekiswa nokuphakamisa isitulo esinamavili ngokuthe nkqo, isitulo esinamavili sesikere
Kwangelo xesha, kusetyenziswa umatshini wokutsala ongena maginethi osisigxina, ophucula ukusetyenziswa kwesakhiwo kunye nokusebenza kokuqhuba kwesinyusi. Umbane wokuhambisa umbane ungenziwa ngokwezifiso kwaye uhambelane ngokungqinelana nombane wasekhaya wabathengi. Idisk brake eyakhelwe-ngaphakathi yenza ukuba umsebenzi we-lifti ukhuseleke, ivolumu incinci kune-injini engundoqo yesiko phantsi komthwalo ofanayo, kwaye ukuthwala okutywiniweyo akufuneki ukuthambisa igrisi. Ukuba ufuna oku kuphakanyiswa kukhubazekileyo, nceda usinike ubungakanani beetafile ezithile, umthwalo kunye neeparameter zokuphakama, kunye neefoto zokwenyani zendawo yokufaka, kwaye siya kucwangcisa abayili abaziingcali ukuyila nokwenza ngokwezifiso ngokweemfuno zakho ezithile.